Puri Rath Yatra 2018 Packages | Dana: + 91-993.702.7574
Iwe uri muteveri wechokwadi weHinduism here? Kutsvaga nzvimbo yechitendero inofanirwa kushanyirwa munguva yehupenyu hwako, wedzera Puri Rath Yatra 2018 kunyore yako! Zvakanaka, Puri Rath Yatra zvirokwazvo chimwe chinhu chinofanira kutorwa kamwe chete munguva yehupenyu.
Kupupurira mutambo mukuru panyika yose Rath Yatra, umo vanamwari vanobuda kunze kwetembere, vachiputsa chigumbuso chekunyengera, chitendero, nekutenda kutumira shoko rehumwe kune zvose. I-Puri-essence, ngoro huru, mhepo ine mhepo inobhururuka nemvura inonaya kamwe-kamwe uye iyo dinopofous din inoita mutambo wakanakisisa muIndia, Rath Yatra 2018 chiitiko chimwe chemarudzi ayo.
Rath Yatra yakakurumbira nyika inofarirwa nehupfumi, kushingaira kwechitendero uye mweya wekubatana. Ruzha rukuru rwemakwakwakwa, madhiramu, nemimhanzi inonzwa sokuti denga rawira panyika kuti rive nenyasha. Zvinotendwa kuti kana iwe uchikwevera ngoro imwe chete - iwe uchawana mari yako kuenda kudenga. Uye, hapana munhu ari panyika angafarira kupotsa Puri Rath Yatra 2018!
SandPebbles inopa zvinoshamisa mapaji Puri Rath Yatra Tour, kuitira kuti iwe uwane rusununguko rwusina hanya nekugara munguva dzakaoma zvikuru dzeguta racho. Kunyangwe iwe uchida kufamba kubva kuBhubaneswar kana kugara muguta munguva yePuri Rath Yatra, tinogadzirira zvose kubva pakutsvaira hotele kunotasva, kufamba, uye zvose, kuti uite rwendo rwako rwekuyeuka rusingakanganwiki. Yedu Puri Rath Yatra 2018 purogiramu inosanganisira:
Mumwe wevamiririri vedu vachakugamuchira pa Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar uye anokuendesa kuhotera. Kana iyo ndege inosvika mangwanani, unogona kushanyira Smart City kana kuenda kuPuri, kungova 60 Km motokari kubva muguta. Kudya kuchagoverwa muhotera.
Mushure mekudya kwemazuva ekufambisa kuenda kuPuri panzira kuenda kuDhauli (Ashokan Rock Edict uye Shanti Stupa), Pipili (Applique Work Village), Sakshigopal (Radha Krishna Temple) & Raghurajpur / Naikpatna (Painting Village). Kusvika paPuri, Tarisa kune hotera. Manheru anoshanyira kuna Ishe Jagannath Temple kuti Uite Chikamu mu Live Live Aarati Darshan (Vasati-Hindu havabvumirwi mukati memutemberi). Iwe haufaniri kushanyira "Char Dham" kuitira kuti uwane "Moksha" (ruponeso), kana uchishanyira Puri Temple. Dzokera kuimba yehotera.
Mushure mekudya kwekudya kwemafambisi kuenda kuPuri Badadanda. Chirongwa chakakosha chakaitwa padenga rehotera kuti uone Rath Yatra. Kana iwe uchida kuwona Rath Yatra kubva padenga reimba zvakanaka famba mangwanani. (Breakfast breakfast packet, bhodhoro remvura, zvokudya zvakasara (veg) zvichagoverwa iwe.
Mushure memangwanani emangwanani, gadzirirai kuona nzvimbo. Enda kune Narendra Pokhari, Lokanath Temple, Markandeshwar Temple, Lakshmi Temple, Ganesh Temple, Gundicha Temple, Swargadwar, Raghurajpur Artist Village, Bimala Temple & many more. Dzokera kune hotele uye udye uye usiku hwakanaka urope.
Nzvimbo yevashanyi vanofambisa, vanouya kuzotora tsvina yekuchenesa. Imwe yemhenderekedzo dzakanaka kupfuura dzose muIndia, uko mvura inoputika yeBay yeBengal inonamatira kunaka kwayo. Iwe unogona kunakidzwa nemafungu anononoka agere pamberi pegungwa ane kunakidzwa kwemagetsi echando nezvimwe zvinhu zvekudya kana kuenda kune motokari refu kuenda kuPuri-Konark Marine Drive mumugwagwa.
Mumwe haagoni kukanganisa mashandiro anowanikwa pasi pePuri. Tarisa michero ye sirivha uye zvakare kutenga Sambalpuri naBomkai vanocheka vachakugadzirisa nebasa ravo rakaoma.
Kunze kwekupinda muRatha Yatra Mutambo, vafambi vari muPuri vanogona kutarisa zvimwe zvingasarudzwa zvinoshandiswa nevashanyi. Puri Beach, Konark Beach, Konark Sun Temple mamwe emakwikwi anoyevedza anotarisa kunzvimbo dzakapoteredza Puri. Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaKonark Sun Temple, ASI Museum (Yakasimbwa neChishanu), Ramchandi Temple & Chandrabhaga Beach. Manheru anosunungura pahombekombe yegungwa uye anonoka pamusika wemusika wePuri. Usiku huno paPuri.